Shiinaha Semi-auto Ultrasonic Tube Filler Iyo Sealer HX-006 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Mashiinka HX
Awood 18-30pcs / min
Cadaadiska Hawada 0.6MPa
Cabbir L1300 * W900 * 1550mm
* Gacan ku siinta quudinta tuubada, calaamadda diiwaangelinta otomaatigga ah ee tilmaamaysa, buuxinta, ku xiridda koodh, goynta dhammaadka, quudinta tubbada.
* Wuxuu korsadaa tiknoolajiyada wax lagu xiro ee loo yaqaan 'ultrasonic sealing technology', looma baahna waqti diirimaad, xasilooni iyo xasillooni nadiif ah, dhalanrog la'aan, iyo diidmo hooseysa oo ka yar 1%.
* PLC oo leh nidaamka xakamaynta shaashadda taabashada ee leh qalabka digniinta ayaa si toos ah u eegi kara macluumaadka alaarmiga ee shaashadda taabashada, waxay heli kartaa dhibaatada, isla markaana si dhakhso leh u xallin kartaa.
* Saldhig kasta waxaa lagu maamuli karaa si madax banaan shaashadda taabashada, saaxiibtinimo si loogu hagaajiyo tuubooyinka kala duwan. Shaqaaluhu waxay isticmaali karaan hal tuubo oo kaliya si ay u dejiyaan dhammaan jagooyinka, iyagoo keydsanaya waqti badan iyo qalab.
1. Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
5. Qaabka leh albaabka nabdoonku wuu dhawaaqi karaa oo istaagi karaa
Hore: Dhaqaalaha Ultrasonic Tube Filler Iyo Sealer HX-002
Xiga: Mashiinka laba-buuxinta iyo mashiinka wax lagu xiro HX-009S